Raad Raac News Online – Madaxweyne Farmaajo ayaa hambaliyo ku aaddan guusha doorashada ku celiska aheyd u diray Madaxweyne…
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambaliyo ku aaddan guusha doorashada ku celiska ah waxa uu u diray Madaxweynaha Kenya Mudane Uhuru Kenyatta.
Qoraal lagu baahiyay wakaaladda wararka dowladda, ayaa Madaxwyenaha waxaa uu yiri “Aniga oo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan dowladda iyo shacabka Kenya ugu hambaliyeynayaa guusha dimuqraadiyadeed ee ay gaareen.”
Madaxwyene Farmaajo waxa uu kalsooni weyn ku qabaa in dib u doorashada Madaxweyne Kenyatta ay sii xoojineyso xiriirka wanaagsan ee haatan ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Soomaaliya waxaa kala dhaxeeya Kenya xiriir dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo qotodheer, waxaana dowladda ka go’an in ay hormariso nabadda, ganacsiga iyo iskaashiga dhaqaale ee ay la wadaagto Kenya.
Madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta ayaa markale ku guuleystay codbixinta kuceliska ah isagoo helay in ka badan 98% cododka, maadaama mucaaridka ay qaadaceen inay codkooda dhiibtaan. doorashada ku celiska waxaa diiday inuu ka qaybgalo guddoomiyaha mucaaradka Raila Odinga. Waxaa iyaguna jiray lix murashax oo kale kuwaasi ayaa helay codod aad u yar